Yakasimba acid cation kuchinjana ...
Asina simba asidi cation kuchinjana r ...
Yakasimba base anion kuchinjana ...
KUDZIVA ARSENIC KUSVIRA POTABLE MVURA SYSTEMS
Arsenic chinhu chine chepfu chine madhigirii akasiyana emutemo. Iyo yakajairwa MCL (yakanyanya kukwirisa chikamu) yearsenic mumvura yekunwa yeUSA iri 10 ppb.
MA-202U (Macroporous Yakasimba-Base Anion Shanduro Resin)
MA-202U inokwana simba, kuvhunduka kusagadzikana, macroporous, Type I, yakasimba basic anion exchange resin inopihwa kloride fomu seyakanyorova, yakaoma, yunifomu, idenderedzwa marozari .Iine yakanakisa osmotic kugadzikana, pamwe neakanaka maitiro einetic. Iyo resin inoshandiswa kuburitsa uranium kubva kune yakagadziriswa mhinduro mu-situ leaching tekinoroji.
Uranium inowanzoitika isina kusimba radioactive chinhu. Matunhu akakwirira euranium mumvura anogona kuwedzera njodzi yekenza uye kukuvara kweitsvo. Yakawanda yeiyo uranium inoiswa nechikafu kana chinwiwa nemuviri wemunhu yakaburitswa, asi zvimwe zviyero zvinopinza muropa uye itsvo.
Yakasimba Acid Cation (SAC) resini mapolymer akagadzirwa nepolymerizing styrene uye divinylbenzene uye sulfonating ne sulfuric acid. Dongli kambani inogona kupa gel uye macroporous mhando SAC resins ine akasiyana crosslink. Yedu SAC inowanikwa mumatanho mazhinji anosanganisira H mafomu, saizi yunifomu uye giredhi rekudya.